Mahiga oo markale usoo hiloobay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Ergaygii hore ee Qaramada Midoobay u qaabilsanaa Arimaha Soomaaliya, una dhashay dalka Tanzania, Agoustine Mahiga ayaa sanad kadib markii xilkaas laga qaaday shalay dib ugu soo laabtay Muqdisho, waxa uuna kulan la qaatay madax katirsan dowlada Soomaaliya.
Mahiga oo la hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in uu magaalada Muqdisho u yimid si uu u qiimeeyo hor marka dalka uu gaaray maadama uu mudo sanad ah ka maqnaa, waxa uuna tilmaamay in Muqdisho uu ku arkay hormar.
“Boqashada aan ku imid Muqdisho sanad kaddib markii aan ka tegay iyo labadii sano ee KMG ahaa ee aan dalka ku sugnaa, waxaan maanta dib ugu soo laabtay Muqdisho si aan u eego horumarka la gaaray, islamarkaana aan salaan u sido guud ahaan shacabka Soomaaliyeed kuwa dalka jooga iyo kuwa ka maqanba, waxaana aad ugu mahadcelinayaa dadkii ka dambeeyay horumarka la gaaray” ayuu yiri Mahiga oo la hadlay RM.
Agoustine Mahiga ayaa sheegay in maalintii shalay xarunta madaxtooyada Soomaaliya uu kula kulmay R/wasaaraha Soomaaliya, Cabdi Wali Sheekh Axmed ayna kawada hadleen arimo badan oo muhiim ah.
Ergaygii hore ee Qaramada Midoobay u qaabilsanaa arimaha Soomaaliya oo ahaa nin saameyn badan ku lahaa siyaasadii dalka xiligii KMG si weyna ugu dhax milmay siyaasada ayaana la ogeyn ujeedada ka dambeysa safarka uu maanta Muqdisho ku yimid, hase ahaatee wuxuu sheegay inuu usoo hiloobay Muqdisho.
Bishii April ee sandkii 2013 ayaa Agoustine Mahiga xilka laga qaaday kadib markii uu xilka hayey intii u dhaxeysay sanadihii 2010 and 2013, waxaana badelkiisa la magacaabay ninka kazoo jeeda dalka Britain ee lagu magacaabo Nicholas Kay.
Mahiga: Mogadishu made A Lot of Progress in